चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुं#सक बनाउने औषधी ? - Aajako Nepali Khabar
चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुं#सक बनाउने औषधी ?
चीनमा श्रीमान्को धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्लाई औषधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औषधी होइन, पुरुषलाई नपुं#सक बनाउने औषधी हो ।
ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गोप्य तरिकाले यस्तो औषधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुं#सकताको शिकार हुने गर्छन् ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गोप्य तरिकाले डाय#गाइ#लस्टीलबे#स्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ता लागेको छ । जानकारीमा उल्लेख भए अनुसार यो औषधी एक प्रकारको सि#न्थेटिक एस्ट्रो#जन हो जसले पुरुषलाई इरे#क्सनबाट रोक्ने गर्छ । चीनमा हालै यस्ता किस्सा कहानी सोसल मिडियामा निकै भायरल भएका छन् ।
लेखमा केही महिलाको प्रतिक्रिया पनि लिइएको छ । यसमा एक महिलाले औषधीलाई प्रभावकारी बताएक छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो औषधीलाई का#र्सिनो#जनको रुपमा पहिचान गरेको छ ।
पसलमा काम गर्नेहरुका अनुसार औषधीले सामान्य रुपमा १५ दिनमा आफ्नो असर देखाउन सुरु गर्छ । राहतको कुरा के हो भने यो औषधीको सेवन गर्न बन्द गरेको २१ दिनमा इरे#क्सनको क्षमता २१ दिनमा फिर्ता हुन्छ ।
मन्त्र तथा ध्वनि एकदमै शक्तिशाली हुन्छ, मुटुको व्यायाममा अनाहत चक्र : विधि र फाइदा